ikhaya/Videos/Windows 11 yenza indawo yokubuyisela / uyibonise
embi26. Novemba 2021
Akukho nto ibaluleke ngaphezu kokubuyisela apho kunokwenzeka ukubuyisela inkqubo emva kokuphazamiseka. Siza kukubonisa kuphela indlela yokwenza indawo yokubuyisela, kodwa kunye nendlela yokubonisa zonke iintengiso.
Ukukhanyisa kwam: ➡️ https://amzn.to/3jX5hs8
Ukukhanya kwevidiyo yam: ➡️ https://amzn.to/34ek601
►Ifacebook: ➡️ https://www.facebook.com/windowspower.de
►Isixhobo: ➡️ https://twitter.com/windowspower_de
Amakhonkco eAmazon adibeneyo
Veza ikhompyuter yam kunye nePhaneli yokuLawula kwidesktop yeWindows 8
Sebenzisa ukuKhulisa okuLungiselelwe
Khipha usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Windows 10 amanyathelo okuqala
Useto lwabucala lweWindows 8
Funda ulwazi lwePC kwimizuzu nje emi-2
Hlela kwaye uguqule iividiyo ngenkqubo yefoto
izilungiselelo ukubuyiswa kwenkqubo yenza indawo yokubuyisela yenza indawo yokubuyisela iifestile 11 bonisa amanqaku okubuyisela 11 Windows windows 11 inkqubo yokubuyisela windows imiyalelo iiwindows hacks iingcebiso zewindows Iingcebiso zewindows 2021 windows ubuqili windows ubuqhetseba 2021 iiwindows tutorials
Imiyalezo ye-47 Ukuthandwa kwe-3
Akukho nto ibaluleke ngaphezu kokubuyisela apho kunokwenzeka ukubuyisela inkqubo emva kokuphazamiseka. Siza kukubonisa kuphela indlela yokwenza indawo yokubuyisela, kodwa nendlela onokuzijonga ngayo zonke iintengiso. ———- Iwebhusayithi yethu: ➡️ https://www.windowspower.de Bhalisa kwiYouTube yethu: ➡️ https://www.youtube.com/user/WindowsPowerDE Bhalisela isitishi sethu kwiTelegram: ➡️ https://t.me/WindowsPowerDE Landela...
Kwiiyure eziyi-3 ezidlulileyo